डा. उपेन्द्र देवकोटाले जन्मघर पुगेर फर्किएपछि भने… — Newskoseli
डा. उपेन्द्र देवकोटाले जन्मघर पुगेर फर्किएपछि भने…
वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको शरीर रोगल गाल्दै लगेको छ । बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालको आईसीयू कक्षमा उपचार गराइरहेका उनलाई कार्डियाक मनिटर र अक्सिजन सपोर्ट दिइराखिएको छ ।
असाध्ये रोगले ग्रसित उनको मुहारमा केही दिनयता अनौठो आत्मसन्तुष्टि झल्किएको आफन्त र चिकित्सकले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् । एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. मयुस मुनाकर्मीले शनिबार प्रश्न सोधिहाले– ‘डाक्टरसाप् कस्तो लाग्यो त ?’
डा. देवकोटाले बिस्तारै ओठ खोले र भने– ‘आई फिल अमेजिङ, वन्डरफुल !’ नजिकै बसिरहेका आफन्तको अनुहारमा पनि चमक देखियो, डा. देवकोटाको प्रतिक्रिया सुनेर । ‘घरको पिँढीमा बसेर सिस्नेपानीको पानी कलकल खाने इच्छा थियो,’ देवकोटाका भतिजा वसन्तले भने– ‘गाउँ पुगेर त्यो धाराको पानी खाएर आएपछि उहाँको अनुहारमा अनौठो सन्तुष्टि देखियो ।’
जन्मगाउँ पुग्ने उनको इच्छा बिहानदेखिकै निरन्तर प्रयासपछि परिवारले शनिबार पूरा गरिदिएको थियो । ‘बेलायतमा छँदैदेखि उहाँले मेडम (श्रीमती डा. मधु) लाई एक पटक गाउँ पुर्‍याउन वचनबद्ध गराउनुभएको रहेछ,’ वसन्तले भने– ‘थप सुधार होला र सकेसम्म बासै बस्ने गरी लान सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर, शनिबारै लैजाने निर्णय भयो र पुर्‍याइयो पनि ।’
बेलायतस्थित किङ्स कलेज हस्पिटलमा उपचार भइरहँदा डा. देवकोटाले श्रीमती मधुसँग ‘एक पटक मलाई गाउँ पुर्‍याइदिनुपर्छ’ भनेका थिए । ‘घरमा जाने, लमजुङ साइँलीटारस्थित मामाघर जाने र सबैलाई भेटेर आउने भन्नुभएको थियो,’ देवकोटासँग गोरखा पुगेर फर्किएका उनका मामाका छोरा काशीराज घिमिरेले भने– ‘लमजुङचाहिँ पुर्‍याउन सकिएन ।’
डा. देवकोटाको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि गाउँ लैजाने योजना परिवारको थियो । १८ गते शुक्रबार अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो, चिकित्सकले तत्काल भेन्टिलेटरमा राख्ने निर्णय गरे । उनको स्वास्थ्यमा बिहीबार केही सुधारको संकेत देखिएपछि चिकत्सकले शुक्रबार भेन्टिलेटर हटाएको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।